Madonna nke Giampilieri laghachiri na anya mmiri: oge ​​mbụ 30 afọ gara aga | Blọọgụ nke ekpere
Madonna di Giampilieri na-alaghachi anya mmiri: oge ​​mbụ afọ iri atọ gara aga
Paolo Tescione	Edere ya Maggio 1, 2020 Maggio 1, 2020
Obi dị m ụtọ na enwerekwa ndị mmadụ nọ ebe a taa, enwere m olile anya na Nwanyị nwanyị anyị ga-anụ ekpere ha, enwere mkpa maka ntụgharị nke mkpụrụ obi ”. Oriakụ Pina Micali na-ekwu okwu n'ụlọ ya n'ime hamampili nke Giampilieri Marina na Messina n'ihu akpụrụ akpụ nke Nwanyị nwanyị anyị nke sorrows onye ga-amalite ịwụsị "anya ọbara", na-adọta ọtụtụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi si Puglia na ugwu nke Italy. Dabere na ndị njem ala nsọ ahụ, mmiri nwere mmanụ ga-ada site n'ụdị akpụrụ akpụ ahụ.
Ihe dị ka mmadụ iri atọ na-ezukọ na ekpere n'ihu ihe a kpụrụ akpụ: enwere ndị na-arịọ maka amara, onye ga-agwa Oriakụ Pina okwu. Ma nke ikpeazu adighi aru ike ma o nweghi ike iguzo. Ọ na - egosi elu ma kelee mmadụ dị nkenke ma jụọ onye ọ bụla ka o kpee ekpere site na-ekwe nkwa na ọ bụrụ na ha alọghachite na ọ ga-enye ha akwa na mmanụ na-agbadata site na akwa uwe nke Madonna. Onye ọ bụla na-ekwu na ha kwenyere na ọrụ ebube ahụ, ọbụlagodi na Curia ekwupụtawo nke ọma n'okwu a.
Onyinye si Agrigento nyere onyinye akpụrụ akpụ ahụ n'afọ gara aga, ebe enwere akara ndị ọzọ nke Madonna nwere ihu nwere akara uhie. N'elu elu, ihu Kraist nke dị n'akụkụ ihe ndina nke Signora Pina, ihe mbụ ụlọ ahụ sitere na afọ 25 gara aga, na 1989, "ọbara" gaara awụfu. Na 1992 ọ bụ oge nke otu ihe akpụrụ akpụ nke Madonna na nke ndị ọzọ niile nyere Signora Pina. Iji nabata ndị kwesịrị ntụkwasị obi, Francesca Gorpia otu n'ime ndị otu Emmanuele Onlus mkpakọrịta.
"Kwa ụbọchị Tuesday na Fraịdee na Satọdee mbụ nke ọnwa ọ bụla, anyị na-agụ chapleti ma Oriakụ Pina na-ahụ Madonna - ọ na - ekwu - oge ndị ọzọ ọ hụkwara Jizọs. Nne nke Chukwu kọwara na ọtụtụ mkpụrụ obi taa na - ahọrọ ihe ọjọọ. onye ahu aghaghi ikpe ekpere bayere ha. Nwaanyị anyị kwukwara na ọ họọrọ Giampilieri maka ihe omume ndị a n'ihi na ntụgharị nke mkpụrụ obi ga-amalite site ebe a ”. Maka obi abụọ ndị ziri ezi banyere akụkọ ahụ, onye ọrụ afọ ofufo zara: "N'oge gara aga, ndị dọkịta enyochala anya mmiri na enwere okwu banyere ihe omume na-akọwaghị na ọnụnọ nke ọbara mmadụ".
← Na post gara aga Gara aga post:Pope: onweghi onye n’arughi oru, ugwu na ezi ugwo
Ọzọ Post → Post ozo:O mere ụnyaahụ, Ọbara na anya mmiri na-esite na akara ngosi Kraịst (vidiyo)
Otu nzaghachi na "Nwanyị anyị nke Giampilieri na-amalite ịkwa ákwá: nke mbụ afọ 30 gara aga"
Giuseppina Cavarretta o kwuru, sị:
Mee 30, 2020 n’elekere 3: 15 nke ehihie
M na-eche ihe kpatara na akpụrụ akpụ na-amalite ịkwa akwa ugbu a.
Oriakụ Pina kwesịrị ịjụ Madonna kpatara. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị ejighi nhọrọ nke ndụ anyị alaghachikwute Chineke kwa ụbọchị, na-ebi ndụ Oziọma, na-ahụ n'anya ma na-ekpe ekpere, anyị agaghị enwe ike ịda mbà mmụọ a.